Internet Download Manager V6.11 Build7Patch...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Internet Download Manager V6.11 Build7လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Update လေးထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...!Update လေးတွေမှ သုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အဆင်ပြေအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်ရတာပါ...!ကျွန်တော် Patch ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်...! သူငယ်ချင်းတို့ သိပြီးသား ဖြစ်သောကြာင့် ရှင်းမပြတော့ပါဘူး...! အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
1.Installanewest version of IDM.
2.Exist IDM (Right click on IDM icon in system tray--->Exit)
3.Run and click Patch.
" ဒီမှာယူးသွားပါ..." ( 4.97 MB )
No Response to "Internet Download Manager V6.11 Build7Patch...!"